5.1: ကျနော်တို့ လက်ခံရရှိလျှောက်ထားသူမှ I-20 အီးမေးလ်။
ပျှမ်းမျှအဆင့် ၃.၀ အောက်တွင် software ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူတစ် ဦး အဖြစ်ခိုင်မာသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပါက (သို့မဟုတ်) ကမ္ဘာ့အဆင့်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ရရှိလျှင်သင်၏လျှောက်လွှာကိုစဉ်းစားလိမ့်မည်။
သငျသညျ 32-12 လလောက်ကျောင်းကိုအချိန်ပြည့်သွားပါနှင့်ရှေ့သို့အပြည့်အဝငွေပမာဏကိုပေးဆောင်ချင်မဟုတ်လျှင်နိုင်ငံတကာအတွက်စုစုပေါင်း MSCS အစီအစဉ်ကိုအချိန်, 13 လအတွင်းန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ Intern များကိုစဉ်အတွင်း, ကျောင်းသားများညနေခင်းနှင့်တနင်္ဂနွေလေ့လာနေ, အကွာအဝေးပညာရေးမှတဆင့်မှာအနည်းဆုံး4သင်တန်းများအခြိနျပိုငျးယူပါ။ (တစ်ခုချင်းစီကိုအကွာအဝေးသင်တန်းပြီးမြောက်ရန်နှင့် ပတ်သက်. လေးလကြာပါတယ်။ )
ဒါဟာပုံမှန်အားကျောင်းဝင်းလေ့လာမှုအပေါ် 32-1 လအတွင်းနှင့်အတူ, နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ၌အကြှနျုပျတို့၏က MS ၏ Track 8 ဖြည့်စွက်ဖို့အကြောင်း9လအတွင်းကြာပါသည်။
Track3သည် Opusal Practical Training ဖြင့် ၁၂-၁၃ လကြာကျောင်းဝင်းအတွင်းအချိန်ပြည့်လေ့လာရန်လိုအပ်ပြီးအစတွင်အစီအစဉ်အပြည့်ပေးရန်လိုအပ်သည်။
စိတ်မရှိပါနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘာသာရပ်တွင်မဟာဘွဲ့သာရရှိထားပြီးအဆင့်မြင့် software များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ web application များနှင့်ဗိသုကာပညာအပေါ်တွင်အာရုံစိုက်သည် ဒေတာသိပ္ပံ.
မဟုတ်ပါ၊ သင်၏ GPA သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက် ၃.၀ အနက်မှ ၃.၀ အောက်သာလျှင်မဟုတ်ပါကမဟုတ်ပါ။ သင်၏ GPA သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်နှင့်မကိုက်ညီပါကကျွန်ုပ်တို့ GRE အားယူရန်သင့်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ GPA 3.0 ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော GRE သည်အထွေထွေစာမေးပွဲကိုဖြေဆိုရန်လိုအပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ MSCS အစီအစဉ်တွင် ၀ င်ရန်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အရေအတွက်ကဏ္onတွင်အနည်းဆုံး ၇၀% (၁၅၈) ရရန်လိုအပ်သည်။ ကိုနှိပ်ပါ ဒီမှာ ပိုမိုသိရှိလိုပါကအဘို့, ပေးပါ။
မှတ်ချက်: GRE ကနေအားလုံးလျှောက်ထားခြင်းမှလိုအပ်ပါသည် အီရန်။ ထံမှ အိႏၵိယ နှစ်နှစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပရိုဂရမ်းမင်းလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသည်မဟုတ်လျှင် GRE ကိုယူရမည်။ သူတို့၏ GPA သည် ၃.၀ (အထက်ပျမ်းမျှ) ဖြစ်သည်။
17 ။ အကြှနျုပျ၏ GPA 3.0 ထက်လျော့နည်းသည်။ ငါနေဆဲသင့်ရဲ့အစီအစဉ်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အခွင့်အလမ်းရှိသလား
သင်၏ GPA နိမ့်ကျမှုကိုလျှော့ချရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ GRE ကိုယူပြီးကဏ္ sections အားလုံးတွင်အထူးသဖြင့်အရေအတွက်အပိုင်းကိုအမှတ်ရရန်ဖြစ်သည်။ GRE အထွေထွေစာမေးပွဲကိုဖြေဆိုရန်လိုအပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ MSCS အစီအစဉ်တွင် ၀ င်ရန်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အရေအတွက်ကဏ္onတွင်အနည်းဆုံး ၇၀% (၁၅၈) ရရန်လိုလိမ့်မည်။ စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာပရိုဂရမ်းမင်းအလုပ်အတွေ့အကြုံကိုလည်း GPA နိမ့်များအတွက်လျော်ကြေးပေးလိမ့်မယ်။ ကိုနှိပ်ပါ ဒီမှာ အသေးစိတ်သိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍
ဖေဖော်ဝါရီ၊ Aprilပြီ၊ သြဂုတ်လသို့မဟုတ်နို ၀ င်ဘာလများတွင်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ MSCS အစီအစဉ်တွင်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသားနှင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရသူများသည်ဖေဖော်ဝါရီ (သို့) သြဂုတ်လတွင်စာရင်းသွင်းရန်သာလျှောက်ထားနိုင်သည်။
သင့်အခန်းနှင့်အစားအစာအတွက်ကြိုတင်ပေးစရာမလိုပါ။ သင်ကျောင်းဝင်းသို့ရောက်သည့်အခါသင်၏ကန ဦး ငွေပေးချေမှုသည်ပထမ ၈ လအတွက်ကျူရှင်၊ မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်၊ အော်ဂဲနစ်ထမင်းစားခန်းနှင့်ကျန်းမာရေးအာမခံပါသောလူနေအိမ်ခန်းမခန်းတစ်ခန်းပါ ၀ င်သည်။ ထိုကုန်ကျစရိတ်များသည်သင်၏ကုန်ကျစရိတ်၏တစိတ်တပိုင်းဖြစ်ပြီးသင်၏ပေးဆောင်ရသည့်အလုပ်သင်တွင်ဝင်ငွေကိုစတင်ပြီးမှစတင်သောသင်၏ဘဏ်ချေးငွေဖြင့်ပေးချေသည်။
အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းအမှန်တကယ်တစ်ပညာသင်ဆုထက် သာ. ကောင်း၏။ အနိမ့်ကနဦးကုန်ကျစရိတ်, ဘဏ်ချေးငွေကျနော်တို့စီစဉ်ကူညီခြင်းနှင့်ပုံမှန်အားစတင်ရန် $ 85,000 မှ $ 90,000 တစ်နှစ်ဝင်ငွေကြောင့်အလုပ်သင်ပေးဆောင်။ အဆိုပါချေးငွေကိုအလွယ်တကူကြိုတင်ကျောင်းဆင်းပွဲမှဆပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကမပို 1000 months ago ထက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်လျှင်, GRE (ဘွဲ့လွန်စံချိန်တင်စာမေးပွဲ) ယေဘုယျစမ်းသပ်မှုများ၏အရေအတွက်အပိုင်းအပေါ်အနည်းဆုံး 90% ဂိုးသွင်းတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီမှ $ 36 ပညာသင်ဆုကိုဆက်ကပ်။
* ကွန်ပြူတာပညာရှင်များအလုပ်ရှာဖွေရေးရေးစင်တာဝန်ထမ်း paid လက်တွေ့ကျတဲ့လေ့ကျင့်ရေး Intern များကိုတည်နေရာအတွက်အောင်မြင်မှုအဘို့အကျောင်းသားများအတွက်ပြင်ဆင်လော့။ တစ်နှစ်လျှင် $ 98 ပျမ်းမျှလစာနှင့်အတူ 99-90,000% အလုပ်သင်နေရာချထားအောင်မြင်မှုနှုန်းသည်။